गायिका पिरजादाको निजी तस्वीर र नाङ्गिएको भिडियोहरू बाहिरिएपछि… भिडियो सहित – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > गायिका पिरजादाको निजी तस्वीर र नाङ्गिएको भिडियोहरू बाहिरिएपछि… भिडियो सहित
admin November 7, 2019 जीवनशैली, भिडियो	0
गत हप्तादेखि गायिका पिरजादाको निजी तस्वीर र भिडियोहरू अनलाइन र सामाजिक सञ्जालमार्फत बाहिर आएपछि भाइरल भएका छन्। जसमा उनी अ’श्‍लील अवस्थामा नाचिरहेकी थिइन् । यसपछि उनको पाकिस्तानमा कडा आलोचना भइरहेको छ । मानिसहरूले उनलाई सोशल मीडियामा पनि ट्रोल गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल र अनलाइनमा आफ्नो भिडियो अनावश्यक ढंगले भाइरल गरिएको भन्दै संघीय अन्वेषण एजेन्सीमा उजुरी समेत दर्ता गराएकि छिन् ।
बाबाकाे भित्र रूप, बाहिर साधु भित्र यस्तो… केहि समयमा फैसला हुदै अाशाराम बाबाकाे! – भिडियो
भक्कानिएर रुँदा अन्तर्वार्ता लिनै सकेनन्! सहयोग दिदै भने- मनु तिमी देवी हौं (भिडियो हेर्नुस)
अचम्मका व्यक्ति भेटिए गुल्मीमा (भिडियो सहित